Mpanara-dalàna tsy mitonona anarana - Church of God Switzerland iray manontolo
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Mpanao lalàna tsy fantatra anarana
"Manahoana, Tammy no anarako ary izaho dia" legalista ". Folo minitra lasa izay dia nanameloka olona iray tao an-tsaiko aho: "Mety hieritreritra zavatra toy izany aho amin'ny fivorian'ny Legalists Anonymous" (AL). Hanohy aho ary hilazalaza ny fomba nanombohako tamin'ny zavatra kely; nihevitra aho fa niavaka tamin’ny fitandremana ny Lalàn’i Mosesy. Ahoana ary no nanombohako nijery ambany ny olona tsy nino toa ahy. Vao mainka niharatsy izany: Nanomboka nino aho fa tsy misy Kristianina hafa afa-tsy ireo ao amin’ny fiangonako. Ny maha ara-dalàna ahy aza dia tafiditra tao anatin’ny fieritreretana fa izaho ihany no nahafantatra ny tena dikan-tenin’ny tantaran’ny Fiangonana ary ny sisa amin’izao tontolo izao dia ho voafitaka.
Nanjary ratsy loatra ny fiankinan-doha ka tsy te hiaraka amin'ireo olona tsy ao amin'ny fiangonako, izay ao anatin'ny "tontolo". Nampianariko ny zanako ho toy ny tsy mailo tahaka ahy aho, toy ny fakan'ny ahitra, nitombo Ny lalàm-panorenana ara-dalàna ao an-tsain'ny Kristiana.Izay tampoka ireo toro-hevitra ary mijanona mandritra ny fotoana ela na dia efa voarona aza ny fotony lehibe. farany tsy mitovy mihitsy rehefa sitrana tanteraka ianao.
Ny iray amin'ireo faka mafy indrindra dia ny toe-tsaina manentana ny saina rehefa miketrika olona toa zavatra amin'ny alàlan'ny fanombanana azy ireo fotsiny izy ireo arakaraka ny ataon'izy ireo. Io no fomban'izao tontolo izao. Raha tsy mijery tsara ianao na tsy manao tsara, dia tsy vitan'ny hoe tsy misy dikany ihany fa koa azo ialana.
Ny fanantitranterana be loatra amin'ny fampandehanana sy ny fampiasana dia fahazarana misaina maharitra ela vao miala. Raha tsy manao izay antenainy hatao ny mpivady dia ho diso fanantenana na ho sosotra amin'ny farany. Ray aman-dreny maro no manery ny zanany hanao zavatra tsy ilaina. Izany dia mety hitarika ho amin'ny fahasarotan'ny tsy fahampiana na olana ara-pihetseham-po. Ao amin’ny fiangonana, ny fankatoavana sy ny fandraisana anjara amin’ny zavatra iray (na amin’ny vola izany na amin’ny fomba hafa) no matetika tomban’ny soatoavina.
Misy vondron'olona hafa ve mifampitsara amin'ny hafanam-po sy hafanam-po? Ity fironana maha-olona tafahoatra ity dia tsy olana tamin'i Jesosy. Hitany ny olona tao ambadiky ny asa. Ary rehefa nentin'ny Fariseo teo amin'i Jesosy ilay vehivavy azo nijangajanga, dia izay nataony ihany no hitany (taiza ny namany?). Jesosy dia nahita azy ho ilay mpanota manirery izay somary sahiran-tsaina ary nanafaka azy tamin’ny fanamarinan-tena nataon’ireo mpiampanga azy sy ny fitsaràny an-dravehivavy ho toy ny tanjona.
Miverena any amin'ny "AL AL". Raha manana drafitra dingana roa ambiny roa ianao dia mila miditra amin'ny fampiasana ny fomba hitondrana ny olona ho olona ary tsy ho zavatra. tsarao araka ny zava-nitranga tamin'io vehivavy nanam-bady io. Ary i Jesosy Kristy dia mitsangana eo anoloany ary manontany tena raha manipy ny vato voalohany isika.
Angamba aho hiasa amin'ny dingana iraika ambin'ny folo hafa ihany koa, saingy ho an'ny ankehitriny, mieritreritra aho fa ampy izany raha mikitika ahy ny "vatolampy" voalohany miaraka amiko hampahatsiahivako ny tenako fa i Jesosy dia mahaliana kokoa hoe iza isika izay ataontsika.